‘Umprofethi’ mbumbulu ushaywe kanzima ngokudlwengula odade ababili | Scrolla Izindaba
‘Umprofethi’ mbumbulu ushaywe kanzima ngokudlwengula odade ababili
Umprofethi mbumbulu osolwa ngokudlwengula odade ababili ulwela impilo yakhe esibhedlela.
Washaywa kanzima ngamalungu omphakathi abethukuthele.
Kuleso siphithipithi, amalungu omphakathi abe esephikisana namaphoyisa ngaphakathi esiteshini samaphoyisa e-Alexandra, efuna ukuthi umsolwa odlwengulile adedelwe nokuthi bavunyelwe ukumqeda nya ngenduku.
Lolu daba ludalulwe ngoMgqibelo odlule, ngesikhathi lo mprofethi mbumbulu edlwengula owesifazane oneminyaka (engama-22) ngemuva kokwenza sengathi ususa otokoloshe abekade belele naye.
Ngemuva kokuthi lo wesifazane ekhulumile, udadewabo oneminyaka eyi-19 naye wabe esebika udaba lwakhe, watshela amalungu omndeni ukuthi wadlwengulwa amahlandla amathathu kusukela ngoMandulo, edlwengulwa nguye lo mlisa.
Kusukela lapho, abesifazane abaningi bebelokhu bekhuluma ngakho konke asebedlule kukho.
Lezi zindaba zacasula amanye amalungu omphakathi kwase kulandela izinxushunxushu.
• Lowo osolwa ngokudlwengula ushaywe kanzima
• Watakulwa ngamaphoyisa amthatha amyisa ezitokisini ukuze aphephe
• Lo mprofethi usegumbini labagula kakhulu esibhedlela saseTembisa ugadwe ngamaphoyisa
• Amaphoyisa athi ubhekene namacala amabili okudlwengula
Amalungu omphakathi abedinwe egane unwabu emaphoyiseni asolwa ngokuvikela lo mdlwenguli. Bafuna ukuthi akhululwe.
Ikhansela leqembu le-Economic Freedom Fighter (EFF) laboshwa ngemuva kwezingxabano. Libhekene namacala okusabisa, ukudala udlame emphakathini kanye namanye amacala.
Owesifazane wesithathu naye owadlwengulwa yilo mprofethi, usedalule nezindaba zokuhlukumezeka kwakhe ezandleni zalo mprofethi mbumbulu.
Okhulumela amaphoyisa ase-Alexandra uSayitsheni Simphiwe Mbatha ukuqinisekisile kwabakwa-Scrolla.Africa ukuthi, amaphoyisa amane athole imihuzukwana ngemuva kokuba iqulu labantu lishayisane namaphoyisa ngaphakathi esiteshini samaphoyisa lifuna ukuthi adedelwe umsolwa odlwengulile ukuze bakwazi ukumbulala.
“Ikhansela liboshwe lisendlini yalo ngeSonto ekuseni. Selokhu aboshwa, iqeqebana lamalungu omphakathi, amanye agqoke izimpahla ze-EFF, abelokhu ebhikisha ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa efuna kudedelwe umholi wawo.”